Svondo, 15 Kurume 2020
"Nokuti handina kureva pachangu, asi baba, vakandituma, ndivo vakandipa murayiro, zvandichareva nezvandichataura. Ndinoziva kuti murayiro wavo ndihwo upenyu husingaperi; naizvozvi zvandinotaura, ndinotaura sezvandakaudzwa nababa" (Johane 12 ndima 49 kusvika 50).
Jesu ndivo vakataura mashoko atavhura nawo. Mwari ndivo vaivaraira zvekutaura. Ndivo vaivapa mashoko ekutaura. Izvi ndizvo zvavari kutizivisa mundima iyi. Jesu vakazoenderera mberi. Tinoverenga mashoko avo muna Johane 12 ndima 50. Vakati, "Ndinoziva kuti murayiro wavo ndihwo upenyu husingaperi; naizvozvi zvandinotaura, ndinotaura sezvandakaudzwa nababa". Mashoko aya anoshamisa zvikuru.
Jesu vane mamwe mashoko avakambotaura. Tinoaverenga muna Johane 20 ndima 21. Vakati, "... Rugare kwamuri! Baba sezvavakandituma, neni ndinokutumaiwo". Jesu vakanga vasiri kungotaura kuna Jakobo chete. Vakanga vasiri kungotaura kuna Johane. Vakanga vasiri kungotaura kuna Petro. Vakanga vasiri kungotaura kuvaApostora. Vakanga vari kutaura kwatiri. Saka tinofaniravo kutevedzera zvavaiita. Ivo vaitaura mashoko aMwari Baba. Nesuwo tinofanira kutaura mashoko ekudenga. Tinofanira kutaura mashoko eVamwari. Tinoshandavo nemirairo. Hatingotauri zvose zvose. Tinoudzwa zvekutaura.
Tiri Vakristu. Saka hatizviraramiri. Tinoraramira Mwari. Hatitauri mashoko edu. Tinotaura mashoko avo. Tinotaura takavamiririra. Izvi ndizvo zvaiitwa naJesu. Takatopiwa mashoko acho ekutaura. Izvi ndizvo zvatinovona muna VaHeberu 13 ndima 5 kusvika 6. Inoti, "... nokuti iye amene akati ... Naizvozvo tinotsunga mwoyo, tichiti ...". Saka taura mashoko ekudenga. Ndiko kuti ugorarama hupenyu hwekudenga. Unohurarama uchiri pano panyika.
Simba reVamwari riri mumashoko. Mwari ndivo vakaronga izvi. Mashoko haana chinoavharira. Anogara nekusingaperi. Anosvika munyika yemweya. Ungaataura uri pakavanda. Asi anozopota nenyika dzose. Saka, ungada kugadzirisa zvinhu. Fungisisa Shoko raMwari. Zadza mweya wako neShoko raMwari. Muzadze kusvika Shoko iri rava kubuda nepamuromo pako. Aya anenge ava mashoko eVamwari. Anenge ari mashoko ekudenga. Hareruya!
Hupenyu hwangu hunopupurira nyasha dzaMwari. Tsitsi dzavo dzinondirinda. Mutsa wavo unondikomberedza mazuva ose! Ndinorarama mukubwinya kwavo. Ndinorarama murunako rwavo. Kururama kwavo ndiko kunovonekwa pandiri. Saka ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Ndinozvitonga ndichishandisa simba raMweya Mutsvene. Muzita raJesu. Ameni.
Marko 11 ndima 23
Zvirevo 6 ndima 2
VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10